Pakistana : Fijery Avy Any Afovoany Atsinanana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Mey 2018 12:56 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Novambra 2007)
Mideast Youth (Tanoran'ny Afovoany Atsinanana) : Nanoratra tao amin'ny Mideast Youth, i Umar Farooq niresaka mikasika ny lalàna momba ny fanambadiana ao Pakistana
“Ny hamehana araky ny ambaran'ny fitondran'i Musharraf dia toa teny iray mahafinaritra fotsiny ihany hanoloana ny anarana iray manimba hoe” Lalàna Miaramila”. Mba tsy hitanilàna, azo lazaina mora foana fa ny dingana ataon'ny governemantan'i Jeneraly Musharraf ankehitriny, raha ny marina, dia ny fampiharana ny lalàna miaramila fa tsy hoe hamehana akory, “hoy ny fanazavany.
Ampian'i Farooq avy eo :
Milamina (Ny) vahoaka be ao Pakistana. Na izany aza, noho ny politika henjana sy tsy ara-drariny nataon'ny fitondran'i Musharraf no nahatonga ireo faritra sasany any Pakistana ho marefo amin'ny fisainana mahery fihetsika. Ny politika toy izany sy ny vokany no azo antoka fa hifarana miaraka amin'ny fahataperan'ny fitondran'i Musharraf. Na izany aza, mba hahatrarana io tanjona io, tsy maintsy manampy ny vahoaka ao Pakistana izao tontonlo izao, amin'ny alàlan'ny fanomezana hafatra mafonja ho an'ny fitondran'i Musharraf.
Tokony ahitàna fanambaràna tsy misy fepetra ny fanalàna ilay filazana vonjy taitra (Lalàna Miaramila) io hafatra io, ary avy eo tokony hiantohan'ny fitondran'i Musharraf izay hisian'ny fifidianana malalaka sy tsy mitanila ao Pakistana, araka ny tetiandro.
Mideast Youth (na ny Tanoran'ny Afovoany Atsinanana) koa dia nanohana fanangonan-tsonia iray ho fampitsaharana ny lalàna momba ny fanambadiana ao Pakistana.
Ny Kabobfest dia miatrika ilay olana amin'ny alalan'ny hanihany. Hoy izy nanoratra :
“Amin'ny anaran'ireo fanjakana Arabo marobe, ny Manampahefana Palestiniana sy Isiraely, arahaban'ny ny KABOBfest i Pakistana fa tongasoa anatin'ny klioba manokan'ireo firenena miaina ambanin'ny lalàna ‘hamehana’. Na efa ela ihany aza izy ireo no efa tao amin'io vondrona hajaina sady miavaka io, mety tsara ao ny Pakistana tarihan'ny fitondran'i Musharraf …
Ho firaisankina, ary hiatrehana ny loza be mihatra amin'ny fitonian'ny KABOBfest, dia manao filazana vonjy taitra ho an'ity blaogy ity aho. Manakana ny fahazoana miditra anaty fanehoankevitra misokatra aho, hamerina manoratra sy mijery tsara ireo lahatsoratra aho, ary hanapaka hanivana ny lisitry ny imailaka nalefan'ny olona ny KABOBfest mandra-pitsahatry ny fanafihan'ireo mpampihorohoro “Tsy fantatra anarana” eo amin'ny sehatra natao ho an'ny fanehoankevitra, Hoy izy nanoratra .
Ao Ejipta, naneho hevitra mikasika ny zava-nitranga tao Pakistana, tao aminà lahatsoratra iray mitondra ny lohateny hoe Musharaff's Last Dance in Pakistan (na Ny Dihy Farany Nataon'I Musharaff Tao Pakistana) i Zenobia, blaogera, …
“Ny zavatra hitanao ao Pakistana amin'izao dia Ny Dihy farany ataon'i Pervez Musharaff, toy izao no ataon'ireo mpanao didy jadona rehefa tsapan'izy ireo fa tandindonin-doza ny seza fiandrianany sy ny fanjakany.
Tsy fanafihana ny demaokrasia no ataon'i Prevez, fa fanafihana fanaovana vivery ny ainy mba hiarovana ny fisiany, tsotra be ilay izy, mahatsapa ilay lehilahy fa tsy ilain'ny olona, indrindra taorian'ny zavatra maro azon'i Bhutto na teo aza ireny asa fampihorohoroana mahatsiravina ireny “, hoy izy manamarika.
Manampy ihany koa i Zeinobia hoe :
“Tena mampalahelo ny mahita ny zava-mitranga ao Pakistana, ilay tena firenena Silamo manana hery nokleary tena izy, adinoy ny momba an'i Iràna, voalohany efa nanana fitaovam-piadiana nokleary i Pakistana. Pervez no ohatra akaiky indrindra ho an'ny jadona izay miankina amin'ny tafika sy ny tandrefana, ankehitriny navelan'ny tandrefana aorianany izy satria ireo mpanao jadona miankin-doha toa an'i Musharaff dia voaporofo fa tsy mitondra na inona na inona ho an'ny tandrefana afa-tsy ny fahapotehana, ny tafika no hany hery iankinan'Ingahy jeneraly amin'ny ankapobeny ary izany no mahatonga ahy maminavina fa hoesorina insh Allah tsy ho ela izy amin'ny alalan'ny fanonganam-panjakana iray ataon'ny tafika tahaka ny nataony taona vitsy izay ka nitondra azy ho eo amin'ny fitondrana.
Ireny fisamborana misesisesy tao Pakistana ireny no mampahatsiahy ahy ny fisamborana nampalahelo tamin'ny volana Septambra izay nitondra nivantana tamin'ny famonoana ny Filoha Sadat, tokony haka lesona avy amin'ny hadisoan'ny hafa i Musharaff adala.
Avy any Torkia, mahatsapa i Metin fa ny fivoaran-draharaha tao Pakistana dia toa nanaloka ny fitsidihana nataon'ilay Praiminisitra Tiorka Recep Tayyip Erdogan tany Etazonia.
“Mazava ho azy, fa ny toe-draharaha miaraka amin'i Musharraf ao Pakistana izay zanak'i Etazonia mandra-piverin'i Benazir Bhutto teo anoloan'ny sehatra, no nanaloka ny fitsidihana nataon'i Erdogan . . .Hadisoam-potoana indray nataon-dry zareo Tiorka” hoy izy nanoratra.